Al-shabaab oo sheegtay inay gacanta ku haayaan diyaarad kusoo dhacday gobolka Sh/hoose – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Al-shabaab oo sheegtay inay gacanta ku haayaan diyaarad kusoo dhacday gobolka Sh/hoose
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigeen bur-burka diyaarad nooceeda uu yahay Drone ee aan cidi wadin, taasi oo ku soo dhacday gobolka Sh/hoose.
Qoraal ay Al-shabaab kusoo daabaceen baraha Internet-ka ee ay wararka ku faafiyaan ayaa waxay ku sheegeen diyaaradaan inay kusoo dhacday deegaanka Saddex Xarar oo ka tirsan gobolka Sh/hoose, una jirta 5km deegaan lagu magacaabo Goobaale.
Diyaaradaan ayeey Shabaabka sheegeen inay soo dhacday habeenkii xalay xilligii lagu guda jiray salaada cishaha, dadka deegaankana ay kusoo wargeliyeen ciidamada Shabaabka.
Al-shabaab ayaa markii ay ku baxeen goobta diyaaradan ay kusoo dhacday waxa ay ugu tageen sida ay sheegeen bur burka diyaarada, maadaama goobta diyaarada ay kusoo dhacday ay aheyd goob dhagxaan ah oo diyaarada sidaasi ay ku bur burtay.
Sidoo kale, waxa ay Shabaaku sheegeen inay gacanta ku dhigeen kaamirooyin ku xirnaa diyaarada oo nooceeda uu yahay mida wax basaasta, iyaga oo intaasi raaciyay inay warbaahinta u soo bandhigi doonaan dhawaantaan.
Waxay Al-shabaab hadalkooda intaasi ku dareen in diyaaradaan loo maleynaayo inay ka soo duushay garoonka diyaaradaha ee Balidoogle ee gobolka Sh/hoose, halkaas oo ay ciidamo ajaanib iyo kuwa Soomaali ah fariisimo ay ku leeyihiin.
Si kastaba ha ahaatee, deegaanka Saddex Xarar ayaa 70-KM qiyaastii wuxuu u jiraa deegaanka Balidoogle ee gobolka Sh/hoose, mana ahan markii u horeysay oo meelo ka mid ah Soomaaliya ay ku soo dhacaan, diyaaradaha wax basaasa.